Kooxo hubeysan oo diyaarad ku rasaaseyey Doolow - SomaliNet Forums
Kooxo hubeysan oo diyaarad ku rasaaseyey Doolow
Postby TheblueNwhite » Tue May 01, 2012 11:32 am
Guddoomiyaha gobolka Gedo ee dowladda KMG ah, Maxamed Cabdi Kaliil oo arrintan uga warramay saxaafadda ayaa sheegay in diyaaradda markii ay soo dagtay lagu furay rasaas nala waaweynna lagu shiday, taasna ay keentay inay dib uga duusho garoonka.
"Waxaa garoonka la dhex-dhigay gaari tikniko ah, ciidammo badanna waa lagu wareejiyay... markii ay diyaaraddu soo cago-dhigatay ayaa waxaa lagu furay rasaas waxayna ka carartay garoonka iyadoo ku laabtay Nairobi," ayuu yiri Kaliil oo sheegay in odayaashii si xun loola dhaqmay.
Guddoomiyaha gobolka Gedo wuxuu falkaan ku eedeeyay dad diyaasbaro ah oo uu sheegay in gobolka ay carqalad ka wadeen, inkastoo aysan jirin cid uu si gaar ah carrabka ugu dhuftay, isagoo xusay inay socdaan baaritaanno lagu raadinayo kuwii ka dambeeyay falkan.
Afhayeenka dowladda KMG ah ee gobolka Gedo, Aadan Axmed Xirsi (Rufle) oo isana la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in kooxihii falkan geystay ay qaarkood gacanta ku dhigeen kuwii kalena ay raadinayaan, wuxuuna xusay in falkii lagula kacay ay aad uga xumaadeen.
"Diyaaraddu odayaal dhaqan ah oo shirka Muqdisho u socday ayay qaadi lahayd waana la xabbadeeyay taasoo keentay inay dib uga dhoofto garoonka," ayuu yiri Aadan Rufle.
Xukuumadda Soomaaliya aya waxay toddobaadyadii ugu dambeeyay odayaal ka keenaysay gobollada dalka si ay uga qaybgalaan shirka lagu ansixinayo dastuurka cusub ee dowladda kaasoo ay dad badan mucaaradeen, iyadoo falkan uu noqonayo kii ugu horreeyay oo lagu horjoogsado odayaal doonaya inay ka qaybgalaan shirka Muqdisho.
WAR DEG DEG AH:Kooxo hubeysan oo Caawa Toogtay Cali Gaab
by Arrivederci » Wed Jul 01, 2015 5:29 pm » in General - General Discussions
Wed Jul 01, 2015 5:39 pm
Kooxo hubeysan oo xasuuq ugu geystay tuulada Coomaad ee G/Hi
by Hiiraan boy » Sat Jun 30, 2007 6:17 am » in General - General Discussions
Sat Jun 30, 2007 7:09 am
Doolow Youth Group Meet, On Advancing Doolow District Video
by Murax » Fri Oct 12, 2012 6:35 pm » in Provinces - Gedo
Doolow mayor and others visit construction of Doolow airport
by BuuloXubeey » Tue Nov 12, 2013 7:13 pm » in Provinces - Gedo
by LightAtNight View the latest post
Sh Aadan Siiro oo ka digay Kooxo
by Goljano Lion » Fri Apr 22, 2011 8:05 pm » in General - General Discussions
Faahfaahin La Xiriirta Nin Hubeysan Oo Ay Askarta Gaalkacyo
by FBISOMALIA » Sat May 28, 2011 11:07 am » in Politics - Puntland
Sh Aadan Siiro oo ka digay Kooxo Al-shabaab
by Goljano Lion » Fri Apr 22, 2011 8:08 pm » in Politics - Somaliland
Funny news; kooxo Curyaamiin Ah oo Hubaysan
by snuten2006 » Wed Jan 16, 2008 6:04 pm » in General - General Discussions
Kooxo Islaamiyiin Ah Oo Hubaysan Oo Puntland Ka Askumay
by Hiiraan boy » Thu May 10, 2007 5:19 am » in General - General Discussions
Thu May 10, 2007 5:19 am